Manchester City Oo Ku Maadeysatay Marouane Fellaini Ka Dib Markii Ay Sawirka Leroy Sane Oo Garoon Ceeryaamo Ah Ku Tababaranaya Soo Dhigeen Twitter | Sahan Media Group
Manchester City Oo Ku Maadeysatay Marouane Fellaini Ka Dib Markii Ay Sawirka Leroy Sane Oo Garoon Ceeryaamo Ah Ku Tababaranaya Soo Dhigeen Twitter
December 19, 2017 - Written by Ridwaan Saleebaan
sahannews/Sports Kooxaha Manchester ka dhisan ee United iyo City ayaa xafiiltankooda waxa uu tan iyo 2008 noqday mid cirka isku shareeray, iyadoo kooxda Sky Blues ay la soo baxday awood weyn tan iyo markii uu iibsaday milkiilaha carbeed Sheikh Mansour.
Kulankoodii ugu danbeeyay ee dhawaan ku dhexmaray Old Trafford waxa uu ahaa mid xusuus leh iyadoo Manchester City ay 2-1 ku badisay, balse natiijada ciyaarta ma ahan waxa la xusuusan doono balse dagaalkii ka danbeeyay.
Qolka labiska ayay ku dagaalameen ciyaartoyda iyo shaqaalaha labada kooxood taasoo keentay in tababare Jose Mourinho lagu shubo caano iyo biyo halka caawiyaha tababaraha Man City Mikel Arteta lagu daqray caag biyo ah oo la sheegay inuu tuuray Romelu Lukaku.
Kulankaas waxaa dhaawac ku seegay Maroune Fellaini oo dad badan ay u arkayeen inay Man United u xiistay madaama uu ku fiican yahay kubadaha madaxa halka City ay ku liidato inay difaacato kubada koornooyinka iyo laadadka xorta ah.
Laakiin sawir ay Manchester City soo dhigtay akoonkooda twitter-ka ee lagu qoro luqadda French ayaa keenay iney ku maadeystaan xiddiga khadka dhexe ee reer Belgium Fellaini.
Akoonka Twitter ee Manchester City ee France ayaa waxa soo dhigeen sawirka Leroy Sane oo garoon ay ceeryaamo qarisay ku dhex jira, waxaana ay taageerayaashooda ka dalbadeen inay sheegaan qofka uu yahay.
Hal taageere ayaa damcay inuu sheekada u bedelo kaftan isagoo tilmaamay in ciyaaryahankaas uu yahay Marouane Felliani madaama xiddiga reer Belgium iyo Leroy Sane ay ka siman yihiin timaha Afro-ga ah.
Laakiin jawaabtii ay bixiyeen Manchester City ayaa aheyd mid cajiib ah oo qosol badan, waxa ay yiraahdeen “Maya! waa ciyaaryahan kubada cagta ah” iyagoo tilmaamay in Fellaini uusan aheyn ciyaaryahan kubada cagta ah.